Amazon Integration - Propars E-export miaraka amin'ny Amazon, Ebay, Allegro ary Etsy
Mora ny mitantana ny fivarotanao Amazon.com miaraka amin'ny Propars!
Ampidiro ao amin'ny Propars ny vokatrao ary amidio ao Amazon, sehatra e-varotra lehibe indrindra manerantany!
Miaraka amin'ny Propars, fampidirana an'i Amazon, manomboka mivarotra amin'ny firenena rehetra izay iasan'ny Amazon, indrindra any Amerika, Eropa ary ny Saikinosin'i Arabia!
Ny kaomandinao avy any Amazon dia voaangona amin'ny efijery iray ihany miaraka amin'ireo baiko hafa rehetra.
Azonao atao ny mivarotra ireo vokatra ampidinao amin'ny Propars amin'ny Amazon amin'ny tsindry tokana.
Ny fivarotana amin'ny Amazon.com dia toa nofinofy ho an'ny orinasa maro. Na izany aza, ny fanokafana fivarotana sy fivarotana amin'ity tsena goavana ity dia mora kokoa noho ny eritreretinao. Mba hahafahana mivarotra amin'ny Amazon miaraka amin'ny fampidirana Propars-Amazon, dia ampy ny manana fisoratana anarana hetra manan-kery any Torkia. Raha manana firaketana hetra ianao, ny hany ilainao dia ny Propars mba ho lasa mpivarotra amin'ny tsena lehibe indrindra eran-tany!
Amin'ny maha-orinasa voalohany sy tokana ao Tiorkia tafiditra amin'ny Amazon.com, Propars dia ao amin'ny lisitry ny Amazon SPN ihany koa ary mpiara-miombon'antoka amin'ny vahaolana amin'ny Amazon any Torkia.
Azonao atao ny mitantana ny fivarotanao rehetra amin'ny toerana iray ihany amin'ny fampidirana ireo fivarotana virtoaly hafa ao amin'ny tontonana Propars, izay hivarotanao amin'ny Amazon.com.
Amazon.com tsena lehibe indrindra eran-tany
Amazon no tranokala e-varotra lehibe indrindra eran-tany manana mpampiasa mavitrika maherin'ny 300 tapitrisa ary vola mitentina arivo tapitrisa dolara mahery isan'andro. Ny maha-mpivarotra amin'ity tontolo iainana ity dia midika fanaterana ny vokatrao manerana izao tontolo izao. Seranana mora sy azo antoka ho an'ny orinasa te hanao e-Export.
Ho fanampin'izay, miaro anao amin'ny fandaniana lehibe izay tsy azo antoka ny fahafantarana ny marika Amazon sy ny fahatokisana anao.
Ny vokatrao, izay amidy amin'ny USD amin'ny Amazon.com, dia hahazo lanja amin'ny TL ary hampitombo ny tombom-barotrao. E-Export dia manolotra anao mpanjifa mety ho an-tapitrisany ary mahazo vola mihoatra ny tahan'ny fifanakalozana vahiny.
Ny fametrahana fivarotana ao amin'ny Amazon.com dia dingana matotra sy mafy. Noho izany antony izany, ataovy azo antoka fa manomana tsara ny antontan-taratasinao ianao. Ny antontan-taratasy an'ny orinasanao any Turkey dia manan-kery amin'ny Amazon.
Aza adino fa afaka mahazo fanohanana matihanina mifandraika amin'ity dingana ity ianao avy amin'ny ekipa Propar. Rehefa vita ny dingana mety dia dingana iray azo ampitaina haingana sy mora ny fizotran'ny fananganana fivarotana. Ankoatr'izay, raha efa manana fivarotana Amazon ianao dia segondra vitsy monja no hampidirana azy ao amin'ny tontonana Propars anao.
Afaka manatona manam-pahaizana manokana amin'ny Propars ianao izao mba hahazoana fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fametrahana sy ny fampidirana fivarotana.
Miaraka amin'ny Propars, mpiara-miasa amin'ny Amazon any Torkia, dia azo atao ny mivarotra amin'ny Amazon ny orinasa rehetra. Ny sasany amin'ireo endri-javatra azonao tombotsoa amin'ny fampidirana Propars-Amazon dia toy izao manaraka izao;
- lisitry ny vokatra ao amin'ny Amazon.com,
- Fitantanana ny kaomandy sy e-faktiora maimaim-poana,
- Fanaraha-maso ny tahiry mandeha ho azy,
- fahafahana fitantanana Tiorka,
- Fiteny mandeha ho azy ary mandrefy fandikan-teny,
- Fanohanana fananganana fivarotana,